Shona language Asina marika 310 kuora kwemavara akavhara rusvingo rwemashizha panhizha panhizha fomu yemuchina
ruvara ruvara rwakaputirwa padenga rakapfeka rine mavara akanaka uye ruvara ruvara. Iyo yakawanda inoshandiswa mumunda, fekitari, nzvimbo, hotera, mafirimu hall, vacationland, mapurisa ekare uye villa yemazuva ano.
yakaora ruvara yakavhenekera padenga pepumburu rakagadzirwa nemichina inotengeswa zvikurukuru inotengeswa kunyika dzakawanda. Vanoda ruvara rwakagadzirwa rakaputirwa pamusoro pedenga rekufukidza imba.
Muvara wakavhenekera wakavhara denga pepa pevhu risati rasvika iyo coil iri 1250mm, zvinhu zvinoshandiswa zvakagadziriswa kushandiswa kwesimbi PPGI zvinhu.
Yakazara yakavhenekera ruvara yakavharwa denga ropumburu rakagadzira mutsara wemichina rinosanganisira decoiler, mabhuku ekugadzira mafomu, kombiyuta yekutonga system uye kubuda patafura.
DZIMWE MACHINE DETAILS TARISA KUTI TARIDZA KUWESITE YEDU
Kugadziriswa kwakagamuchirwa, kana iwe usingawani zvaunoda zvigadzirwa mu webhusaiti yedu, ndapota ndiratidze iwe unoda kukoka, pano isu tinogadzira boka ruchaputsika ndokukupa mhinduro imwe yakagutsikana.